Kacaanka KULMIYE cidna u joojin maayo ! by Muse qaranndi(Hadhwanaagnews) Saturday, September 01, 2012 Dawlada Somaliland oo uu hogaminayo rug cadaa siyasadeed oo jabhad, wasiir iyo gudoomiyeba soo ahaa muddo badana Dawlada Somaliland oo uu hogaminayo rug cadaa siyasadeed oo jabhad, wasiir iyo gudoomiyeba soo ahaa muddo badana kusoo jiray saaxada siyaasada ayaa kolba qaar aan siyaasada iyo hab dawladeedku aqooninie ay isku qaadayaan.Haddaba waxaanu leenahay yaan cidna loo joojin ama caytama ama qayliya . Dawladu waxay leedahay siyaasad taas ayaa la socodsiinayaa;<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Muxaafid yo Mucaarid waa faraqa keliyaata ee shacab ku kala suntanyahay, marka dowladnimo iyo nidaamkeedda laga hadlaayo. Waa wax qabad iyo tartan xora oo ummadda loogu raadinaayo horumar, nidaam hufan iyo barwaaqo lagaga guuro Jahliga, Gaajadda, Cadaalad daradda, sinnaan la,aanta
iyo Midnimo xumadda keenta burburka iyo basan baaska maanta Qaaradda Afrika sidda weyn uga jirta, taasi oo Nin, koox, qabiil ama Urur dan gaara lahi uu isku dayo mijo xaabinta iyo burburinta Dalka, dadka iyo dowladnimadda sidda wadda-jirkaa loo wadda dugsanaayo.
Waa ayaandaro iyo garasho jaan in nin aan shacabka balaadhan ee reer Somaliland toban qof ka soo helaynin in qayladiisa iyo cabaarayntiisa laga fadhiyo waayo. Nayshii waxay tidhi (sidi-sididaadda mooyaane dhul u dhacaagga hubso), nin saan Cadaaliinna waxuu yidhi (a man has to get know his limits).